Izakhiwo ezi-6 eziDumileyo ezinokuthi zisetyenziswe nakweliphi na igumbi lokuhlambela ukusukela nge-3-9m2. Xa Abamelwane Bajonge, Bonke bafuna ukuLudiliza udonga baphinde bafake kwakhona! -Iipompo zeKhitshi eziGqwesileyo 2020 | Ezona mpahla zintle zeKhitshi | Ikhompiyutha yasekhitshini
Ikhaya / Blog / Izakhiwo ezi-6 eziDumileyo ezinokuthi zisetyenziswe nakweliphi na igumbi lokuhlambela ukusukela nge-3-9m2. Xa Abamelwane Bajonge, Bonke bafuna ukuLudiliza udonga baphinde bafake kwakhona!
2021 / 09 / 20 uhleloBlog 1724 0
"Igumbi lokuhlambela lincinci" yintloko ebuhlungu. Ukuba ufuna ukubeka indlu yangasese, amampunge, ikhethini yesipili yekhethini yokuhlamba, umququzeleli weekona, itawuli, njl njl. Nangona kunjalo, "kwiKhowudi yoYilo loKwakha indawo yokuhlala", eyona ndawo incinci yoyilo lwegumbi lokuhlambela yi-10㎡ kuphela, engenako ukuhlangabezana nazo zonke iimfuno. Namhlanje, ndizisa uyilo loyilo lokuhlambela ukusuka kukwahlula okumanzi kunye nokomileyo, ukusetyenziswa, imfihlo kunye nemikhwa yokuphila. Igumbi lokuhlambela elincinci linokusetyenziswa njenge-10 yeemitha zesikwere!
Ubume beemitha zesikwere ezi-3
Abantu abasebenza: izibini ezincinci okanye izidwangube ezingatshatanga
Uhlobo lwendlu olusebenzayo: Igumbi elinye okanye igumbi eli-1 iholo enye
Isiqwenga esinye sibe kuhlobo lwaso
Olu hlobo lwesithuba "esixineneyo", indawo incinci ngokwaneleyo ukuba inganela ubuncwane abathathu: isitya sokuhlambela, ishawa kunye nendlu yangasese. Apha, ungasebenzisa isinki yokuxhoma kunye nendlu yangasese. Oku kuyakonga ngakumbi indawo. Zama ukugxila kwizixhobo zokuhlambela kwicala elinye. Oku akuyi kuphucula kuphela ukusebenza ngokukuko kwendawo yokuhlambela, kodwa kunokuba kuhle kakhulu.
Kuba uhlala wedwa, akukho sidingo sokugxininisa kubucala. Kufuneke u ukubeka phambili ukoneliseka kweendlela zokuphila zomnini kunye nokunciphisa imigca engeyomfuneko yemisebenzi yokuphila. Kungcono ukwazi ukusombulula kwindawo enye. Uyilo isitya, i-countertop kunye nokugcinwa Kwisiqwenga esinye ukugcina indawo kunye nokuhlangabezana neemfuno zokugcina ngaxeshanye.
Kwimeko yamagumbi okuhlambela amxinwa, Iimveliso zangasese zineendonga ezibekwe eludongeni kangangoko kunokwenzeka. Ufuna ukunciphisa ukuqokelelwa kwezinto ezingaphantsi komhlaba ukuze igumbi lokuhlambela licoceke ngakumbi. Imitshayelo, iimopu, iimbiza kunye nezinye izixhobo zodidi zinokudityaniswa endaweni enye kunye nekhonkco elifanelekileyo.
Unako nokungcwaba kwangaphambili ishawa engaphezulu kwangaphambili ukugcina indawo enentloko yeshawari.
Separation Uhlobo lokwahlula okumanzi nolomileyo
Ukuba igumbi lokuhlambela lide kwaye limxinwa, igumbi lokuhlambela liza kuthatha indawo eninzi. Kungcono ukulungiselela igumbi lokuhlambela ngokuhambelana nokusetyenziswa kwesiqhelo kwilayini yangasese, ukusuka emnyango ukuya ngaphakathi, ukwenzela itafile yokuhlamba iimpahla, indawo yokuhlamba, indlu yangasese, indawo yokuhlamba. Indawo yokuhlamba ngokulula Ukwahlulahlulwa ngekhethini yokuhlamba, ukuze zonke ii-intshi zisetyenziswe emaphethelweni emela!
Olu hlobo lwendawo yokuhlamba encinci kufuneka nikela ingqalelo kufakelo kunye nokuthengwa kwezixhobo. Ukuba indawo yokuhlambela incinci, kulula ukuvelisa imeko yengcinezelo, ngakumbi ukuxhoma isifudumezi esikhulu samanzi, kuhlala kukho inkohliso yentloko eluphahleni.
Unokuthathela ingqalelo okufihliweyo okanye okufihlakeleyo kwisilingi edityanisiweyo ukunciphisa ukuhlala kwindawo ephezulu. (Kodwa kukwakho nomngcipheko - ulondolozo lwexesha elizayo luya kuba yingxaki enkulu, ke ukhetho lwesifudumezi samanzi lunokujonga umthamo omncinci wokufudumeza ngokukhawuleza.)
Ubume beemitha zesikwere ezi-4
Abantu abasebenza: Usapho lwabathathu
Uhlobo lwendlu olusebenzayo: Isikwere esingu-50-60, igumbi lokulala elincinci
① "Ezine kwenye"
Uhlobo olubizwa ngokuba "lunye-in-nye" ludibaniso indawo yangasese, isinki, igumbi lokuhlambela (ibhafu / ishawa) kunye nomatshini wokuhlamba kwinto enye. Umsebenzi ngamnye unendima yawo ukwandisa ukusetyenziswa kwendawo yokuhlambela. (Ezinye iintsapho zifuna ukuncama isixa esithile segumbi lokutshekisha ukwandisa indawo yokuhlambela ukuze kufezekiswe iindlela ezine.)
② "Iindidi ezintathu zohlobo olunye"
Indawo yokuhlambela yasekhaya ihlala incinci, Uninzi lweentsapho ziya kuhambisa umatshini wokuhlamba kwibhalkoni okanye ekhitshini. Ngale ndlela, "iziqwenga ezine" ziba "ziziqwenga ezintathu", nto leyo esiyibiza ngokuba "zintathu izimbo".
Indawo yokuhlambela ezimeleyo, indawo yokuhlambela / indawo yokuhlamba / indawo yangasese njengenye
Ubume 1: Indlu yangasese iphakathi, kwaye ishawa kunye nesinki zikwelinye icala. Sebenzisa izahlulelo zeglasi ukwahlula igumbi lokuhlambela kwezinye iindawo. Emva kokushiya indawo yokuhlamba, sonke esinye isithuba sinikwa indlu yangasese, isinki kunye nekhabhathi yokugcina.
Ubume 2: Isinki isemnyango, kwaye ishawa ihlangene nendawo yangasese. Iqonga lokuhlala linokuba lula kubantu abadala abaneengxaki zomlenze ukuba bahlale kwaye bahlambe.
Igumbi lokuhlambela lizimele, kwaye indawo yokuhlamba / indawo yangasese / indawo yokuhlamba iimpahla idityanisiwe
Olu luyilo luvumela umntu omnye ukuba ahlambe ubuso kwaye ahlambe amazinyo ngelixa abanye bekwindlu yangasese okanye ishawa. Xa uhlamba, isipili sendawo yokuhlamba asizukuvelisa amandla.
Yahlula indlu yangasese, igumbi lokuhlambela / isinki / indawo yokuhlamba enye
Ingavala ivumba kwigumbi langasese kwaye iqinisekise umoya omtsha kwezinye iindawo. Kwizindlu zangasese ezifanelekileyo, akukho sidingo sokukhathazeka ngokhuseleko lombane.
Isinki eyahlukileyo, igumbi lokuhlambela / indlu yangasese / indawo yokuhlamba enye
Isinki inokuqwalaselwa ngaphandle kwendlu yangasese. Oku akuqondi kuphela ukwahlulwa kokumanzi nokomileyo, kodwa kukwaqonda nokuba ukuhlamba izandla kunye nokuhlamba kunye nokuhlamba akuchaphazeli omnye nomnye.
Ubume beemitha zesikwere ezi-5
Abantu abasebenza: Iintsapho ezinabantwana ababini
Uhlobo lwendlu olusebenzayo: I-70-80 yeemitha zesikwere, amagumbi amabini kunye neholo enye
Iintsapho ezinabantwana ababini zilungele ukusebenzisa izitya ezibini. Ubomi babantwana ababini bunokulungelelaniswa kwaye bukhule kunye.
Ukuba zimbini izindlu zangasese zohlobo lwendlu yokuqala, uyila njani?
Amagumbi okuhlambela amabini adityiwe kwigumbi lokuhlambela elinye
Ukuba amagumbi okuhlambela amabini okuqala asondelelene kwaye akukho makhulu kakhulu, ukuba ugcina igumbi lokuhlambela elinye, unga dibanisa izindlu zangasese ezimbini ukwandisa indawo yokusetyenziswa. Unokuvula iingcango ezimbini. Inye isiya kwigumbi lokulala eliphezulu kwaye enye isendleleni. Oku kufaneleke ngakumbi.
Ukwahlula kathathu / ukwahlula okune
Igumbi lokuhlambela likhulu emva kokudibanisa, ke linokwahlulwa kathathu ukuphucula ukusebenza kwendawo. Ukuba unendawo eyaneleyo, ungongeza ibhafu okanye igumbi lokutshekisha kwaye ulenze igumbi elinenxalenye ezine.
Umsebenzi wetafile yokunxiba
Xa kukho indawo eninzi, unokongeza umsebenzi wokunxiba kwi-countertop. Kukulungele ngakumbi ukubeka into yokuqaba kukhathalelo lolusu kweli cala emva kokuba uhlambile.
Ubume beemitha zesikwere eziyi-6-9
Abantu abasebenza: Izizukulwana ezithathu kusapho olunye
Uhlobo lwendlu olusebenzayo: malunga ne-100 yeemitha zesikwere, amagumbi amancinci amathathu
Ukuba ngaphezulu kwe-4 yosapho lomlomo, okanye uhlala nabazali / nabazala, kufuneka ugcine izindlu zangasese ezi-2. Ukuba akulunganga ukuya emgceni wokuhlambela xa kukho abantu abaninzi, igumbi lokuhlambela eliphindwe kabini lisebenza ngakumbi. Kwaye ukuhlala nabadala, abancinci ababini bafuna indawo yabucala. Kwimeko enjalo, kungcono ukhethe igumbi lokuhlambela eliphindwe kabini.
Gcina izindlu zokuhlambela ezimbini. Ngokusisiseko, kukho igumbi lokuhlambela kwigumbi lokulala eliyintloko kunye negumbi lokuhlambela kwindawo eqhelekileyo. Oku kunokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abaninzi kunye nokudibana neemfuno ezahlukeneyo zomsebenzi.
Uyilo olukhulu lokuhlambela
▷ Sink + yangasese + ibhafu
Kwimeko apho kungekho magumbi okuhlambela makhulu, olu luyilo lugcina indawo kwaye luyasebenza. Akukho hlulo lumanzi nolomileyo kwigumbi lokuhlambela eliyinkosi ukuphucula ukusetyenziswa kwesithuba kunye nokuhlangabezana neemfuno zenkosikazi.
Ink Sink + yangasese + ishawa
Ukuba igumbi lokuhlambela eliphambili lincinci okanye akukho sidingo sebhafu, ishawa eqhelekileyo inokufakwa. Kungcono ukufaka ishawa kunye nomnyango weglasi okanye ukwahlula ukwahlula umanzi kwaye womile.
Igumbi lokuhlambela eli-XNUMX
Hambisa isinki ngaphandle
Ukuphucula ukusebenza kwegumbi lokuhlambela, ukuze kungabikho kumgca wokuhlamba nokuhlamba kusasa nangokuhlwa.
Yahlula phakathi kwaye imanzi kwaye yomile ngaphakathi
Ukwahlula okumanzi nokwomileyo kwigumbi lokuhlambela lesibini kunye nokwahlula iglasi kuyenza ikhuseleke kwaye isebenziseke ngakumbi. Iyanciphisa indawo yokucoca xa ucoca kwaye ucocekile. Inokongeza indawo yokugcina ukuba umphandle uyafumaneka.
Ukuba akukho lula ukuhambisa isinki ngaphandle, ungafaka ishawa kwigumbi lokuhlambela lesibini. Ukuba indlu isikwere, ungabeka igumbi lokuhlambela ngasekoneni. Beka isinki kunye nendlu yangasese kwicala ngalinye.
Indawo esebenzayo + igumbi lokuhlamba
Unako ukubeka isomisi sokuhlambela kwigumbi lokuhlambela lesibini ukuze uhlambe impahla efanelekileyo. Nangona kunjalo, qaphela ukuba ingaphakathi kwigumbi lokuhlambela kufuneka lahlulwe kakuhle kumanzi kwaye komile ukunqanda amanzi kumatshini, eya kuchaphazela ubomi bayo.
▷ zokubambelela ophilayo
Iintsapho ezihlala nabantu abadala, khumbula ukufaka iintsimbi zokubamba ezinokususwa ngaphezu kwendlu yangasese kwigumbi lokuhlambela elisetyenziswa ngabantu abadala ukuqinisekisa ngokhuseleko.
Iimfuno zobungakanani kwigumbi lokuhlambela
Njengendawo yokusetyenziswa rhoqo, igumbi lokuhlambela kufuneka libe nobukhulu obufanelekileyo. Ndiza kudwelisa ubungakanani obuqhelekileyo bezindlu zangasese. Singacwangcisa kwaye sibeke kwangaphambili xa sihombisa.
1, ukuphakama kwesitya esinye yi-60-120cm, ukuphakama kwesitya esiphindwe kabini yi-120-170cm.
2, ukuphakama kwesitya se-countertop ngokusisiseko yi-80-85cm, kwaye ukuphakama kwenxalenye ephezulu yekhabhinethi yesipili yi-185-200cm. kwangaxeshanye, unokugcina isokethi malunga ne-40cm kwitheyibhile, enokuhlala ngaphakathi kwikhabhathi yesipili.
3, imibhobho yamanzi ashushu nabandayo acwangciswe nge-40cm ukuphakama. I-downspout inokuyilwa kumqolo we-40cm yodonga oluphezulu ukuphucula ixabiso lobuso.
4, ingqalelo kwisipili sekhabhathi esigciniweyo (ibrashi yamazinyo yombane, isomisi seenwele, njl. Ukuba ezinye izixhobo ezincinane zifunwa, isokhethi sinokugcinwa phantsi kwesitya.
Indawo yokupakisha yokuhlambela ayinalo inani elikhulu lezinto ezifunekayo zemihla ngemihla ezihlala kwindawo. Ukucoceka nokubonakala kakuhle kwenza abantu bazive bekhululekile.
Ngaphambili :: Ngubani othi Amagumbi okuhlambela amancinci awanakuba sisiphelo esiphakamileyo? Iindlela ezili-11 zokwenza ukuba zibe nkulu kwaye zibe ntle ngakumbi next: Ukufaka iikhabhathi zegumbi lokuhlambela ngale ndlela kuthathwa njengeklasikhi. Ukuphucula ukungcamla ukuze ufumane amanqaku apheleleyo!